GPS037D - OMG GPS Anti-Lost Tracker Pendant ho an'ny autism / Autistic Kids / zaza ilaina manokana | Singapore Top Mini GPS Tracker manokana ho an'ny autism / Autistic Kids & Dementia Anti-panahy
1. Tohanana tambajotra 4G / 3G / 2G: Famantarana mafy kokoa, tambajotra tambajotra malalaka kokoa, hafainganam-pandehan'ny tambajotra.
2. IP Waterproof: Fitaovana fanamarinana rano tena izy, azo ampiasaina ambanin'ny rano.
3. Smart fanala: Azo vonoina na mandeha ho azy miaraka amin'ny jiro manodidina.
4. Fanaraha-maso GPS Real Time: Mikaroka ireo olon-tianao any aminao na aiza na aiza na aiza, arovy izy ireo amin'ny fotoana rehetra.
5. GPS + WIFI + LBS maoderina amin'ny fametrahana toerana: ny fitaovana dia afaka mamantatra ho azy ny tambajotra fametrahana ary mamadika ny maody fametrahana azy ho azy koa, ao anaty izay mampiasa maody fametrahana azy LBS raha any ivelan'ny trano maody fametrahana GPS. Ny angon-drakitra fanaraha-maso tena izy sy ny toetoetran'ny toeran'ny fitaovana mandeha ho azy
6. Tantaran-tantara ara-tantara (Rakitsoratra an-tongotra): ny làlan-kizin'ny mpampiasa GPS ao anatin'ny 3 volana farany dia hosoratana ho fisavana ny ho avy, mba hahafahanao manara-maso ireo toerana rehetra efa nalehan'ny tompon'ny GPS, mora hahitana ny very.
7. Elektronika Fence Alarm (Geo-fefy): azonao atao ny mametraka faritra azo antoka (ny mpampiasa GPS ho afovoan-tany) mba hitazomana azy ireo (toa ny zanakao, ny anti-panahy, kilemaina) ao anaty faritra, rehefa mivoaka ny faritra azo antoka ilay fitaovana, dia hampipoitra tampoka ilay fitaovana. ny fampiharana an-telefaona.
8. Fanairana fanairana bateria ambany: rehefa tsy mandeha amin'ny herin'ny batterie ny track GPS, halefa ho an'ny lozisialy ny fanamafisam-peo bateria kely.
9. Fihainoana lava: miaraka amin'ity endri-javatra ity dia afaka mihaino an-tsokosoko ilay fitaovana ianao nefa tsy re.
10. Feature Call: Azonao atao ny mampiasa ity fitaovana ity hanara-maso sy hiarovana ny biby fiompinao ary miantso azy hiverina lavitra amin'ny alàlan'ny fiantsoana.
Loko mainty, volamena, fotsy
Bokotra bokotra iray (bokotra herinaratra)
Antenne GPS Namboarina amin'ny antenna seramika vita amin'ny sensitivity avo lenta
Slot karatra SIM One slot
2. Version B:
Famantarana GPS: L1,1575.42MHz C / A code
Sambo GPS: fantsona 20
Fahamarinana momba ny GPS: 5 ~ 15m
Toerana fitobiana azo antoka: 100-1000M
Fitsipika farafahakeliny farany ambany: <0.5 mA
Tombana antonony mialoha: <2.5 mA
Salanisan'ny asa ankehitriny: <55mA
Ny hafanana: -20 ~ 70 ℃
Fanetren-tena: 5% mankany 95% tsy fehezanteny
Fanamarinana: CE, ROHS, FCC ary sns.
Antenne GPS: antenaina FPC avo lenta avo lenta
Antena GSM: vita antena PIFA efatra matetika
OS manohana: Android 2.3 sy ambony, iOS 5.0 sy ambony
2948 Total Views 5 Views Today
Singapore Top Mini GPS Tracker manokana ho an'ny…
GPS033W - Fanaraha-maso GPS tsy misy rano OMG Ho an'ny ankizy kely &…